बालमैत्री शासन व्यवस्थामा अगाडि बढ्दै भीरकोट « Sansar News
बालमैत्री शासन व्यवस्थामा अगाडि बढ्दै भीरकोट
२२ कार्तिक २०७८, सोमबार १६:४९
स्याङ्जा । भीरकोट नगरपालिकालाई बालमैत्री क्षेत्र घोषणा गरेको झण्डै एक वर्ष बित्न लागेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो र स्याङ्जा जिल्लामा पहिला बालमैत्री क्षेत्र घोषणा गरिएको पालिकामा के साँच्चै बालमैत्री कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् त ? बालमैत्री व्यवहार प्रर्दशन गर्ने के–कस्ता कार्यक्रमहरु पालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ र के–कस्ता कार्यक्रमहरु अझै गर्न बाँकी रहेका छन् ?
नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार बालबालिकाले पहिचान, उचित पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरन्जनलगायतका अधिकार परिवार र राज्यबाट प्राप्त गर्न पाउनुपर्दछ । कुनै पनि बालबालिकालाई श्रम, यौन शोषण गर्न नपाइने तथा कुनै पनि प्रकारको यातना दिन पाईँदैन् ।
नेपालमा बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा २०६८ सालबाट नै अगाडि बढेको थियो । जस अनुसार वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु नहुँदै पनि धेरैले बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा गरेका थिए । बालमैत्री क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले धेरै नै निर्धारित सूचकहरु पुरा गरेको हुनुपर्छ । जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पुर्वाधार, शासन व्यवस्थालगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् ।
झण्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर भीरकोटले ०७७ फागुनमा बालमैत्री पालिका घोषणा गर्‍यो । घोषणाको शिलशिलामा न्युनतम सूचकहरु पुरा गर्न पालिकाले विद्यालयहरुमा पिउनेपानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक काम गर्ने, बालबालिकाको लागि खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने, खेलकुद सामाग्री वितरण गर्ने, बाल संगठन निर्माण गर्ने, बालश्रमको तथ्यांक लिनेलगायतको काम गर्‍यो । सबै वडा र पालिकास्तरमा सहजकर्ताहरु नियुक्ति गरेर बालमैत्री पालिका निर्माणको वातावरण तयार गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा बालमैत्री शासनको अभ्यास
अहिले पालिका भित्रका स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रहरु सापेक्षिक रुपमा बालमैत्री ढंगले सञ्चालन भएको देखिन्छ । जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय, सिम्लेका शिक्षक कृष्ण पौडेलले विद्यालयमा बालमैत्री घोषणा हुनपुर्व नै शौचालय र पिउनेपानीको व्यवस्था भएको बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यालयमा बाल सञ्जाल निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयमा बालबालिकाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने अभ्यास गरेको छ ।
हिजोका दिनको तुलनामा अहिले पालिकाले विद्यालय र बालबालिका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सुन्ने वातावरण बन्दै गएको शिक्षक पौडेल बताउँछन् । तर बालमैत्री वातावरणलाई उत्साहित र नतिजामुखी बनाउन पालिकाको तर्फबाट थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षक पौडेलको धारणा रहेको छ ।
नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत शिक्षा शाखाका अधिकृत नविन थापालाई नगरपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको छ । पालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्नेबेलासम्म उत्साहपुर्वक अगाडि बढाइएका कार्यक्रमहरु कोभिडको कारणले निरन्तरतामा अगाडि बढ्न नसकेको अधिकारी थापाको भनाई छ ।
‘हामीले सबै टोल, वडा, विद्यालय र नगर स्तरमा बाल सञ्जाल निर्माण गरेका छौं । ती सञ्जाल निर्माण गरेको झण्डै १ वर्ष भैसकेकोले अहिले त्यसलाई पुनःगठन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं,’ अधिकारी थापाले भने ।
अहिले नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ कक्षा सम्मका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्नको लागि स्थानीय विषयवस्तुहरुमा आधारित पुस्तक ‘हाम्रो भीरकोट’ प्रकाशन गरेर सबै विद्यार्थीहरुलाई पुर्‍याएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई सजिलोसँग आफ्नो समाज र भुगोलको विषयमा ज्ञान हासिल गर्न मद्दत पुगेको अधिकृत थापा बताउँछन् ।
पालिकाले नेपाल सरकारले शुरु गर्नु १ वर्ष अगाडिबाट नै महिनावारी प्याड सबै विद्यालयमा निशुल्कः वितरणको व्यवस्था गरेको थियो । पछी नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयका छात्रालाई संघीय सरकारले प्याड दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि पालिकाले त्यसलाई सहज ढंगले निरन्तरता दिएको छ । विद्यालयमा नै महिनावारी प्याड पाउने व्यवस्था भएपछि छात्राहरुलाई सहज भएको शिक्षक कृष्ण पौडेलले बताए ।
बालमैत्री शासन व्यवस्थाअन्र्तगत स्वास्थ्य संग सम्बन्धित १० वटा सूचक रहेको र ती सूचकहरु अन्र्तगतका धेरै कार्यक्रमहरु संघीय सरकारको तर्फबाट पहिलेदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको पालिका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत नारायणबन्धु अर्यालले बताए । संघीय सरकारको तर्फबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुको अलावा पालिकाले केहि नयाँ कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको थियो । जसमा गर्भवती महिलालाई मासिक रुपमा १ सिट अण्डा दिने कार्यक्रम पनि थियो । पछिल्लो कोभिड महामारी सँगै पालिकाले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको र अब पुनः अगाडि बढाउन खोजिएको अधिकृत अर्याल बताउँछन् ।
बालश्रम मुक्त भीरकोट, बालविवाह रोक्न पालिका अग्रसर
पालिका बालश्रम मुक्त क्षेत्र भएको बालमैत्री क्षेत्र घोषणा गर्नुपुर्व गरिएको अनुुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले पनि पालिका भित्र बालश्रम शोषण गर्ने कार्य नदेखिएको बाल कल्याण अधिकारी नविन थापाको भनाई छ ।
‘हामीले बालबिबाहलाई सुचनाको आधारमा रोक्ने काम समेत गरेका छौं, झण्डै ६ जोडी बालबिबाहलाई हामीले रोकेर छुट्याउने काम गर्यौं, तर सामाजिक परिवेश अनुसार कतिपय बिबाह पुनः पनि भए भन्ने सुन्नमा पनि आउने गरेको छ,’ अधिकारी थापा बताउँछन् ।
अहिले पालिका कार्यसमितिले अनाथ बालबालिकालाई अध्ययनको लागि मासिक १ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । वडाहरुबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम भैरहेको र तथ्यांक आइसकेपछि कार्यविधि बनाएर वितरण प्रारम्भ गरिने अधिकारी थापाले बताए ।
बालकोष र अतिरिक्त क्रियाकलाप
नगरपालिकाले बालबालिकाहरुको सहभागितामा विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नको लागि भिन्न कोषको व्यवस्था गरेको छ । सो कोषमा अहिले १ लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ ।
पालिकाले वार्षिक रुपमा सञ्चालन गर्ने पुँजीगत खर्चमा न्युनतम १५ प्रतिशत बजेटलाई बालमैत्री कार्यक्रमहरुसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । जसअन्र्तगत विद्यालयहरु र बालबालिकासँग जोडिएका निर्माण तथा खरिदसँग सम्बिन्धित कार्यक्रम, खेलकुद मैदान निर्माण तथा खेलकुद सामाग्री खरिद, पिउनेपानी, आदि लगाएतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
बालमैत्री शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएपछि सार्वजनिक विद्यालयहरुमा खानेपानी र शौचालयको राम्रो व्यवस्थाको शुरुवात भएको भीरकोट बालसञ्जालका अध्यक्ष सुदिप पौडेल बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘अहिले हामीलाई विद्यालयका कार्यक्रम तथा बैठकहरुमा सम्मानपुर्वक सहभागिता गराउने गरिन्छ । यसले हाम्रो निम्ति गरिने कामहरुको योजना निर्माणमा हामीलाई सहभागी गराएर हाम्रा भावना तथा आवश्यतालाई सम्बोधन गर्ने कोशिष गरेको छ ।’
सञ्जालका अध्यक्ष पौडेलले पछिल्लो समयमा बाल सञ्जालको नियमित बैठक राख्ने कुरामा कमि हुँदै गएको बताए । सञ्जालको क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने, विद्यालय र समुदायमा निरन्तर अनुगमन गर्ने खालका कार्यक्रम पालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने पौडेलको पालिकासमक्ष अनुरोध छ ।
बालमैत्री शासन भनेको तुरुन्तै नतिजा दिने कार्यक्रम होइन – मेयर खनाल
बालमैत्री शासन भनेको तुरुन्तै नतिजा दिने कार्यक्रम नभएको र यसलाई लक्ष्य निर्धारण गरेर निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने भीरकोटका मेयर छायाराम खनालको धारणा छ । मेयर खनालका अनुसार सबै क्षेत्रमा बालसहभागिता गराउनु, बालहिंसाको न्यूनिकरण गर्नु र बालमैत्री शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गराउने कार्यक्रमहरु पालिकाले अगाडि बढाएको छ । विद्यार्थीको मौलिक क्षमतालाई आधार बनाएर विद्यालयहरुमा पठनपाठनको वातावरण तयार हुँदै गएको छ । बालबालिकाहरुको आफ्नै पहिचानसहित विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफुहरुले जोड दिएको उनको भनाई छ ।
मेयर खनाल भन्छन्, ‘कोभिड संकटको बीचबाट पालिकालाई बालमैत्री क्षेत्र घोषणा गरिएको र कतिपय कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । बाल सञ्जालको नियमित बैठक, गर्भवतीलाई अण्डा वितरण गर्ने कार्यक्रम, बालमैत्री कानुन निर्माण गर्ने, आदि कुराहरुलाई हामीले फेरी सक्रियतापुर्वक अगाडि बढाएका छौं । बालविवाह, बालहिंसा र बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै समस्या भएमा हामीले पालिकामा सम्पर्क गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गर्छौं ।’